ओखलढुंगामा युवकको हत्या ! करेसामा चप्पल र छुरी भेटियो – आफ्नो समाचार
ओखलढुंगामा युवकको हत्या ! करेसामा चप्पल र छुरी भेटियो
Afno News — ६ भाद्र २०७५, बुधबार २०:०८0comment
ओखलढुंगाको मोलुङ गाँउपालिका ३ हर्कपुरमा मृत अवस्थामा फेला परेका एक युवकको हत्या भएको आशंका गरिएको छ । मंगलबार दिउसो आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका २७ वर्षीय सन्तोष कार्कीको हत्या भएको आशंका गरिएको हो । बिहान संगै खाना खाएर धान गोड्न निस्किएका परिवारका अन्य सदस्यहरु दिउँसोपख घर फर्कदा छोरा आफ्नै कोठामा अचेत अवस्थामा फेला पारेको पारिवारिक श्रोतले बताएको छ ।
कार्की लडेको कोठा वरपर रगतले लत्पतिएको देखेपछि परिवारले गाँउलेलाई खबर गरेका थिए । एकैछिनमा गाँउलेहरु जम्मा भएर प्रहरीलाई खबर गरेपछि ईलाका प्रहरी कार्यलय रामपुरको टोली मंगलबार बेलुकानै घटना स्थल पुगेको थियो । तर घटनाको प्रकृति शंकास्पद रहेको भन्दै प्रहरी टोलीले केही गर्न सकेन । बुधबार बिहान करिब १० बजेतिर पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यलयबाट प्रहरी नायव उपरिक्षक अनन्तराम शर्माको टोली घटनास्थल पुगेर घटनाको बिषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी प्रमुख शर्माले हत्याको प्रकृति हेर्दा युवकको आत्महत्या नभई हत्या भएको हुनसक्ने बताए । यसअघि युवकले आत्महत्या गरेको भन्ने सुचना प्रहरी सामु आएको समेत उनले बताए ।
तर स्थलगत रुपमा लासको प्रकृति हेर्दा मृतकका शरिरभरि चोटैचोट रहेको र लास समेत रगतमा लत्पतिएको फेला परेपछि हत्याको आशंका गरिएको हो । ‘मृतकको शरीर रगतले लत्पतिएको भेटियो, घर नजिकैको करेसा बारीमा १ जोर चप्पल, छुरी र करिब ३ सय मिटर पर रगत लागेको सर्ट समेत फेला पर्याे’ शर्माले भने ।
मोलुङ गाँउपालिकाका सुचना अधिकारी गोपाल नेपालका अनुसार कार्की काठमाडौँ बसेर पढ्ने गरेको भएपनि बिगत डेढ महिनादेखि गाउँमै बस्दै आएका थिए । मृतक कार्कीसँगै एसएलसी सम्म सँगै पढेका नेपाल शिक्षित परिवारका मिलनसार केटा रहेको बताउँछन् । ‘म अफिसबाट फर्किदै थिए, अचानक सन्तोषले बिष खाएर आत्महत्या गर्याे भन्ने खबर आयो । म त्यतैबाट उनको घरतर्फ गए, त्यहाँ पुग्दा घटना बिष खाएको हैन, हत्या भएको जस्तो देखियो’ उनले भने ।
सन्तोष कोठामा लडिराखेको र वरिपरि रगतनै रगत रहेछ । उनले लगाएको सर्ट पनि काटिएको थियो, मैले त्यो देख्नै सकिन ।’ सँगै खाना खाएर धान गोड्न आमाबाबु निस्केपछि माथि (केराबारी) भन्ने स्थानबाट अपरिचित व्यक्ति सन्तोषको घर सोध्दै झरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
वडा अध्यक्ष राम कार्कीका अनुसार स्थानीयवासीले देखेको सोध्ने व्यक्तिले दाह्री पालेको कालो तथा सेतो मिसिएको चेक सट, टाउकोमा क्याप र खुट्टामा चप्पल लगाएको देखेका थिए । हत्यापछि उक्त ब्यक्तिले लगाएको सर्ट करिब ३ सय मिटर पर फेला परेको र चप्पल करेसाबारीमा फेला परेकाले उनैले हत्या गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘दिउँसोपख माथिका मान्छेहरुलाई भतिजको घर सोध्दै झरेको रहेछ । स्थानीयले पनि घर बताएछन् तर उनलाई राम्रोसँग नियालेनछन्’ कार्कीले भने । मृतकको घर समेत एकान्तमा रहेको छ । कार्कीले काठमाडौँमा रहेर डिप्लोमा सकाएका थिए । उनका दाजु समेत नेपालमा डक्टर सकाएर बिदेशमा पढ्न गाएका छन् ।
स्थानीयद्वारा आधारशिवीरको फोहोर व्यवस्थापन